Kenya dị njikere dị ka ebe ọhụrụ maka UNWTO General Assembly 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Kenya dị njikere dị ka ebe ọhụrụ maka UNWTO General Assembly 2021
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Kenya na-esetịpụ usoro ọhụrụ na onye ndu na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-agbake na COVID.
The Hon. Najib Balala egbughị nkeji oge mgbe ọ na-akpọ World of Tourism ka ha mee ọgbakọ UNWTO na-abịa na Kenya.
Ugbu a ọ dịịrị odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili ịsị ee n'egbughị oge.
UNWTO chere ruo Satọde ka ọ gwa ndị otu. Nzukọ Ọgbakọ na -abịanụ sitere Morocco gaa Spain.
Na Sọnde, Hon. Najib Balala, odeakwụkwọ njem nlegharị anya maka Kenya kpọrọ World Tourism Organisation (UNWTO) na ndị otu ya ka ha nwee ọgbakọ ọgbakọ ha na -abịa na Kenya.
Morocco bụ ebe izizi ma kagbuo izu gara aga n'ihi nchegbu COVID.
Kenya abụwo onye ndu njem nlegharị anya na Afrịka oge niile, na karịa mgbe a bịara n'ịtọ ụda na ọnọdụ maka kọntinent na karịa.
Na Satọde, Hon. Najib Balala, onye odeakwụkwọ njem nlegharị anya maka mba East Africa a bụ ndị UNWTO gwara ya maka ihe A kagburu Mgbakọ General UNWTO na-atụ anya na Morocco n'ihi nchegbu nchekwa COVID wee kwaga Spain, isi ụlọ ọrụ nke nzukọ a.
Mgbe UNWTO Sekretariat pụtara na ihe ịtụnanya izu ụka a, WhatsApp ghọrọ ebe ọrụ na -arụsi ọrụ ike maka ndị minista njem na ndị isi njem na -emekọrịta ihe.
A na-ejikọta ọnụ ụlọ ndị na-akwado ya na ijiji. O wereghị ihe nkweta maka Najib Balala, bụ onye ode akwụkwọ njem nlegharị anya maka Kenya ogologo oge iji nweta nsogbu a.
Mgbe ahọpụtara Morocco ka ọ bụrụ ebe mgbakọ UNWTO na St. Petersburg, Russia, ya na Kenya na Philippines asọmpi.
Onye dike njem nlegharị anya mba ụwa Najib Balala dị njikere ịnabata ndị nnọchi anya Mgbakọ Mgbakọ nke World Tourism Organisation nke 24 na Kenya site na Nọvemba 30 ruo Disemba 3, 2021
Na Sọnde n'abalị, Minista na-ehi ụra Balala gwara eTurboNews: "Edere m akwụkwọ ozi ịkpọ UNWTO ka o mee Mgbakọ Mgbakọ nke 24 ebe a na Magical Kenya."
Ozugbo nke a mere mgbagharị, a na -enwe ekele maka mmegharị a gburugburu ụwa.
Cuthbert Ncube, onye isi oche nke African Tourism Board kwuru banyere mmepe a, nke abụọ ọ metụrụ na Johannesburg na ụgbọ elu ụgbọ elu Etiopia mgbe njem ọ gara Etiopia na nso nso a.
"Ihe AKọmitii njem nlegharị anya nke frican ji obi zuru oke na-akwado mmegharị a.
The Hon. Najib Balala bụ ezigbo enyi nke ATB na onye ndu njem nlegharị anya na-enweghị mgbagha na Africa na karịa. Ọ na-amasị m ikele Maazị Balala maka ọhụụ ya ma rịọ Hon. Onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili iji kwado arịrịọ mmesapụ aka a, ya mere Kenya, ndị ọzọ nke Africa, na ụwa nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka nnọkọ nke 24 nke UNWTO General Assembly bụrụ mgbakọ kacha mma. N'ezie, ọ nwere nnukwu mkpa maka ọdịnihu nke njem nlegharị anya. Anyị niile chọrọ onye isi ma kwekọrịta ka anyị ga-esi pụọ na nsogbu a wee nwetaghachi ngalaba ahụ. "
The Network Njem Nleta Ụwa na-anọchi anya ụlọ ọrụ njem nlegharị anya n'ihe karịrị mba 128 na-akwadosi Kenya ike ịnabata ọgbakọ mba ụwa nke United Nation's Tourism Organisation.
Dr. Peter Tarlow, dị ka onye isi oche nke World Tourism Network, kwuru na mkpa ọ dị itinye aka na njem nlegharị anya na mba ụwa ma kwuo na Kenya na-anabata mgbakọ n'ozuzu dị otú ahụ na-egosi usoro ọhụrụ na nke na-arụpụta njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Dị ka otu mba ụwa, ọ dị mkpa na a ga-enwe mgbakọ njem nlegharị anya n'ụwa nile na nnabata dị otú ahụ ga-eme ka kọntinent Africa pụta ìhè, karịsịa East Africa, ma nyekwuo mkpali maka mmepe akụ na ụba site na njem nlegharị anya n'ofe Africa.
Network Tourism Network kwadoro echiche na mba dị iche iche gburugburu ụwa kwesịrị inwe ohere nha anya ịnabata nnukwu ọgbakọ. Usoro a zuru ụwa ọnụ na-atụgharị echiche United Nations ka ọ bụrụ eziokwu na-arụ ọrụ.
Mgbe Morocco mere mkpebi na Ọktọba 15 ịkagbu ihe omume ahụ, UNWTO gwara ndị otu ahụ n'ụzọ ziri ezi n'ime ụbọchị atọ na Ọktọba 3 gbasara ọgbakọ ọgbakọ ga -eme na Madrid, isi ụlọ ọrụ UNWTO.
Site n'onyinye mmesapụ aka nke Kenya, ọ ga -asọpụrụ mbọ Morocco tinyere n'ime emume a ma nye ohere ka ọgbakọ ọgbakọ nọrọ n'Afrịka dịka eburu n'obi.
Ọ ga -kwuru, na Executive Council setịpụrụ ụda maka GA ikpeazụ nzukọ bụ na Madrid. Ebe a ga -eme ihe omume abụọ a abụbeghị n'otu obodo mbụ.
Ọhaneze na -elele ka ndị isi UNWTO kwadoro arịrịọ Kenya n'egbughị oge.